Sandals Foundation: Makumi gumi Ekutarisana neCaribbean
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Sandals Foundation: Makumi gumi Ekutarisana neCaribbean
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Resorts • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • Shopping • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kwemakore anopfuura 10, iyo Sandals Foundation yave nzira yeSandals neBeach yekudzorera kunharaunda kuburikidza nezvirongwa zvinotsigira, kusimudzira, nekuvandudza hupenyu hwevanhu veCaribbean. Ndizvozvo makore gumi akatarisana neCaribbean uye kukurudzira shanduko yakanaka kuburikidza nenharaunda, dzidzo, uye zvakatikomberedza zvirongwa.
Nheyo ndiyo ruoko rwehupenzi rweSandals Resorts International. Uku ndiko kupera kwemakumi matatu emakore ekuzvipira kutamba chinhanho chakakosha muhupenyu hwenzvimbo dzinoshanda Sandals mhiri kweCaribbean.
Gore rino rinonyanya kukosha sezvo rinoratidzira makore gumi-egore reSandals Foundation. Mumakore gumi apfuura, iyo Foundation yakashanda nesimba kuti ikwanise kukanganisa hupenyu hwevanhu vanopfuura mazana masere nemakumi mana nemakumi mana vanhu muCaribbean. Nekutarisa kuDzidzo, Nharaunda uye Nharaunda, iyo Foundation yakazvipira kune zviwanikwa zvinogadzira yakanaka uye inogara yakasimba zviwi pazvitsuwa zveCaribbean. Kana mari, sevhisi, kana chipo chemutsa-chinogamuchirwa neChechi, 10% yemupiro uyo unoenda wakananga kutsigira zvirongwa nezvirongwa.
KuSandals neBeaches sangano, mhuri inosanganisira zvinopfuura kungoshanda chete kune mamwe mabhii mana nemahofisi emakambani - inharaunda dzinobva timu idzodzo. Sandals inonzwisisa kuti marongero ayo, kushanda nesimba, hunyanzvi, uye hunyanzvi zvakavatungamira mukubudirira kukuru uko kunouya nebasa. Nekupa kuburikidza nehurongwa hwekusvikira munharaunda muCaribbean, iyo Sandals Foundation inotarisira kuita ayo ehukama mabasa ehukama kuratidza mabasa kune mhuri.
Iyo Sandals Foundation ndeyekuti maSandals nemaBeach anotora sei zvimwe zvezvinoda kuitwa muzvitsuwa kwainoshanda nekuita iyo Carribean yakanakisa. Shangu dzinonzwisisa kuti hazvisi zvekungounganidza nekushandisa mari. Kubudikidza neSiseko, zvakare inoshandisa chishuwo, simba, hunyanzvi, uye simba rechiratidzo rekugadzirisa zvinhu pasi pemisoro mitatu yakatambanuka: Nharaunda, Dzidzo, uye Zvakatipoteredza.
Iyo Sandals Foundation inogadzira uye inotsigira zvirongwa izvo zvinobata uye zvinokurudzira vanhu kuburikidza nehunyanzvi hwekudzidzisa uye nekugadzirisa nyaya dzakaomarara dzemagariro kumusoro-kusimbisa nharaunda. Iyo Foundation yakaona kuti kana ichiisa mari mumunhu mumwe chete, iri kupa simba kune rese netiweki yevanhu - mhuri dzavo, shamwari, nharaunda, uye nyika - avo vese vakagadzirirwa kuti vabatsirwe nemipiro yavo.
384,626 Nhengo dzeMunharaunda dzakakanganiswa kuburikidza nemipiro kubva kuSandals Foundation inosanganisira 243,127 Great Shape! Inc. Dental + iCARE Varwere. Pakave nevanhu makumi maviri nevaviri nemazana manomwe nemakumi manomwe nevatanhatu vanokanganiswa nenzira dzehutano, matoyi 248,714 akapihwa, 102,150 vanozvipira munharaunda, vacheche 24,215 pre-term vakawana mukana wekurwa, uye makati nembwa zviuru mazana mana nemazana maviri nesere dzakaraswa uye kusarerekera.
Nheyo inopa vese vana nevakuru zvishandiso zvakakosha senge kudzidza, zvekushandisa, tekinoroji, zvirongwa zvekuverenga, kuraira, uye kudzidzisa kwevadzidzisi kuvabatsira kuti vasvike pakukwanisa kwavo kuzere. Zvivakwa, dzimba dzekudzidzira, kuwana tekinoroji, uye zviwanikwa zvedzidzo zvinhu zvakakosha zenzvimbo dzekufunda zvizere uye zvakakosha zvakanyanya mukugadzira vadzidzi vakazara. Kuverenga nekunyora ndehumwe hwehunyanzvi hwakakosha kana zvasvika pakukudziridzwa kwevana pachedu uye nedzidzo, uye kuburikidza nezvirongwa zvemu-chikoro zvakaita seProjimendi uye kudyidzana neSuperKids, iyo Foundation iri kushanda kupa vadzidzisi nevadzidzi maturusi nehurongwa hwekuwedzera. kugona kwavo.
“Sandals Foundation inokurudzira tariro. Vakagara vachitevedzera zvavakavimbisa, uye vakabatsira kupinza mandiri pfungwa yekuti chero bedzi paine mukana, kushanda nesimba kunogona kuchinja zviroto, ”akadaro Chevelle Blackburn," Kuchengeta Vana "Scholarship Anogashira.
Sandals Foundation yakapa 59,036 mapaundi ezvekushandisa uye yakabata zvikoro 578 nemakomputa makumi maviri nemazana matanhatu akapiwa, mabhuku 2056 akapihwa, vadzidzi 274,517 vakakanganiswa, vadzidzisi 169,079 vakadzidziswa, uye ma2,455 emabhasari akapihwa.
Icho chivimbiso cheSandals Foundation kusimudzira ruzivo rwezvakatipoteredza, kugadzira nzira dzekuchengetedza dzinoshanda, uye kudzidzisa zvizvarwa zvinotevera nzira yekutarisira nharaunda dzawo nekuchengetedza nharaunda. Nheyo inotenda kuti mangwana inokurudzirwa nezvatinoita nhasi, saka zvakakosha kuti isu tikudziridze tsika yemuno inoziva nezve yavo pamwe uye kukanganisa kwavo pasirese.
Kuburikidza neSheyo, zvivigiro zvegungwa zvitanhatu zvinotsigirwa, zvimedu zvemakorari zvitanhatu zvakasimwa, mazana matatu nemakumi matatu nemakumi matatu nemana nenjiva dzakachekwa zvakachengeteka, makirogiramu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe neshanu aunganidzwa, miti 6 yakasimwa, uye makumi mapfumbamwe nematatu akabatwa nekuziva kwekusvika kwezvakatipoteredza.
Iyo Sandals Foundation ichaenderera ichitsvaga kubatsira kubatsira kuzadzisa vimbiso yenharaunda yeCaribbean kuburikidza nekudyara muzvirongwa zvakagadzikana mune zvakatipoteredza, dzidzo, uye nharaunda. Pamwe pamwe nenharaunda yainoshanda uye yainogara mairi, maSandals anoenderera nebasa rawo kusimudzira hupenyu hwevanhu uye kuchengetedza zvakatipoteredza nzvimbo dzakanaka dzeCaribbean.